I-Beetlebark Bungalow- Ngaphakathi kwe-Yosemite w/ubhavu wamanzi ashisayo ne-EV ukushaja ikhebula - I-Airbnb
I-Beetlebark Bungalow- Ngaphakathi kwe-Yosemite w/ubhavu wamanzi ashisayo ne-EV ukushaja ikhebula
Siyakwamukela ku-BeetleBark Bungalow esanda kulungiswa, etholakala NGAPHAKATHI kwe-Yosemite!
Ithokomele, iyathandeka, futhi iheha, le bungalow encane ye-studio (sq sq ft.) izokunikeza indawo ejabulisayo nejabulisayo yokuphumula umzimba nomphefumulo wakho njengoba uhlola i-Yosemite National Park.
Ezinye izici zale ndlu eyakhiwe ngamapulangwe encane zihlanganisa:
- Ilungiswe ngokuphelele futhi yalungiswa kabusha ngasekupheleni kuka-2020
- Ishaja ye-EV
- Ikhishi elinakho konke futhi
elisebenzayo - Umzila oholela ngqo phansi emzileni
- 50 inch Smart TV ukuze ungene ngemvume ku-Netflix yakho, Hulu, njll.
- Idekhi enkulu engemuva enetafula le-firepit
- I-firepit yangaphandle (ayisebenziseki ezinyangeni zasehlobo noma ngezikhathi zobungozi bomlilo obukhulu, akukho okuhlukile)
- Umshini wokuwasha nokomisa
Uphahla luqukethe izinkuni ezinhle, eziluhlaza okwesibhakabhaka/ezimpunga. Ukhuni lavela esihlahleni esasimoshakele ama-bark beetles.
Izinto zombhede zihlanganisa osofa abasha abangu-2 abadonsayo, bobabili abanomatilasi we-memory foam wamasentimitha angu-6. Kulala abantu
4.81 · 69 okushiwo abanye
Sineqembu lonke elisiza ekunakekeleni ikhaya! Sihlala endaweni, futhi siyatholakala ukuze sikusize nganoma yiziphi izinkinga eziphakama ngesikhathi sokuhlala kwakho. Phumula kalula ngokwazi ukuthi unabantu bendawo abaseduze abangakusiza, hhayi umsingathi ongahlala ngamakhulu amamayela kude!
Sineqembu lonke elisiza ekunakekeleni ikhaya! Sihlala endaweni, futhi siyatholakala ukuze sikusize nganoma yiziphi izinkinga eziphakama ngesikhathi sokuhlala kwakho. Phumula kalula…